धर्म संस्कार संस्कृति विमुख हाम्रो आकर्षण - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	धर्म संस्कार संस्कृति विमुख हाम्रो आकर्षण
by Tanahu Awaj 22nd August 2019
22nd August 2019 270 views
आज भन्दा ठ्याक्कै एक साता अघि अर्थात साउन ३० गते नेपाली हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको ठूलो मध्येको एउटा पर्व परेको थियो, जनै पूर्णिमा अर्थात रक्षा बन्धन । यो पङ्तिकारलाई ठ्याक्कै थाहा नभए पनि जनै पूर्णिमा मनाउने प्रचलनको नेपालमा पुरानो इतिहास रहेको सम्म थाहा छ । साथै यो दिनको धार्मिक एवम् सांस्कृतिक महत्वको बारेमा थोरै भएपनि जानकारी भएजस्तो लाग्छ । जनै पूर्णिमा मनाउन कसरी सुरु गरियो, किन सुरु गरियो भन्ने यथेष्ट जानकारी नभए पनि कसरी मनाईन्छ भन्नेसम्म चाहिँ पङ्तिकारलाई ज्ञान भए जस्तो लाग्छ । तर आजकल जसरी जनै पूर्णिमा मनाईन्छ वा भनौं विगत केही वर्ष देखि जनै पूर्णिमा मनाउने जुन नयाँ चलन सुरु भएको छ
(विषेशगरी किशोर किशोरीहरुमा) त्यसले चाहीँ म भित्र केही जिज्ञासाहरु उत्पन्न गराएको छ । यस पटक म रक्षा बन्धनको त्यही नयाँ प्रचलनहरु बारे आफ्नो जिज्ञासाहरु पाठकहरु सामु प्रस्तुत गर्दैछु । हिन्दु धर्मलाई संसारकै सबैभन्दा पुरानो, सनातन धर्मको रुपमा लिईन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरुमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरु रहेका छन् । तिनै देशहरु मध्ये एक हो नेपाल । धर्म एउटै भएपनि देशको परम्परा र संस्कृति अनुसार मनाइने चाडपर्वहरु र चाडपर्व मनाउने तरिकाहरु फरक फरक हुन सक्छन् । नेपाल आफैमा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ वर्षेनी सयौं चाडपर्वहरु मनाईन्छन् । विभिन्न धर्मका विभिन्न जातजातिको छुट्टा छुट्टै । आफ्ना आफ्नै जनै पूर्णिमा तीनै पर्वहरु मध्ये एक हो, जसको हिन्दु धर्मावलम्वीहरुमा आफ्नै विशिष्ट स्थान छ ।
नेपाली हिन्दु परम्परा अनुसार जनै पूर्णिमाको दिन विहान सबेरै नुहाई धुवाई गरी ब्राम्हणद्वारा बेदका मन्त्रोच्चारण गरी शुद्ध र शक्तिशाली पारिएको पवित्र धागो (रक्षासूत्र) ब्राम्हणद्वारा हातमा धारण गरिन्छ र उनलाई दक्षिणा समेत प्रदान गरिन्छ । ब्राम्हण र क्षेत्री समुदायमा ब्रतबन्ध भइसकेपछि कांधमा पनि जनै (यज्ञोपवित ) धारण गर्ने चलन छ तर अन्य जातिय समुदायमा भने हातमा मात्र रक्षाबन्धन धारण गर्ने परम्परा रहेको छ । यसरी धारण गरिएको जनै वा रक्षासूत्र मन्त्रहरुद्वारा शक्तिशाली पारिएको हुँदा यसले धारण गर्ने व्यक्तिको हरकिसिमले रक्षा गर्ने विश्वास गरिन्छ । सायद त्यसैले यसलाई रक्षाबन्धन पनि भनिएको हुनु पर्छ । यसरी धारण गरिएको रक्षा बन्धन तिहारमा लक्ष्मी पुजाको दिनमा गाईको पुच्छरमा बाँधिदिए सुख–समृद्धिले घरमा बास गर्ने धार्मिक मान्यता छ । ठिक यहि दिन छिमेकी देश भारतमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजु भाइको हातमा राखी बाँधिदिएर रक्षा बन्धन मनाउने प्रचलन छ । यसरी दिदी बहिनीले बाँधिदिएको राखीले दाजु भाइको रक्षा गर्ने र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको बीचको पवित्र सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास राखेको पाईन्छ । भारतमा रक्षा बन्धनलाई दाजुभाई र दिदीबहिनीको चाडको रुपमा लिइन्छ जसरी हामी नेपाली तिहारको भाइटीकालाई लिन्छौं । मनाउने तरिका फरक भए पनि नेपाल र भारत दुबै देशमा जनै पूर्णिमाको दिनको विशेष महत्व रहेको छ ।
विगत केही वर्ष देखि नेपालमा पनि जनै पूर्णिमाको दिनमा राखी बाँध्ने चलन शुरु भएको छ । त्यो चलनले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । यस पटक पनि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रक्षा बन्धनको शुभ कामना र दिदीभाइ– दाजुबहिनीहरुको तस्वीरले सजिए । धेरै दिदीबहिनीहरुले आफ्ना दाजुभाइलाई स्नेह पूर्वक राखी बाँधिदिए, विशेषगरी किशोर किशोरीहरुले र आफुलाई आधुनिक भन्न रुचाउने जमात ले । यहाँनेर मलाई जिज्ञासा लागेको कुरा चाहिँ के हो भने जनै पूर्णिमाको दिन हामीलाई राखी बाँध्नु पर्ने आवश्यकता किन पर्न गयो ? यसको पछाडि कुनै ठोस कारण छ या फेरी यो केवल टीभी हेर्दाहेर्दै सिकिएको आयातित भारतीय संस्कृति हो ? भारतमा राखी बाँधिन्छ ताकि राखी बाँध्नेको रक्षा होस् । हामीले रक्षासूत्र धारण गर्नुृको उद्देश्य पनि त्यही हो । भारतमा रक्षा बन्धनलाई दिदीभाइ र दाजु बहिनीको चाडको रुपमा लिईन्छ । हामीसंग पनि छ दिदीबहिनी र दाजुभाइको चाड । हामी धुमधामले तिहार मनाउँछौं, त । भाइटिका लगाउँछौं । मखमली नओइलाए सम्म मृत्युले छुन नसकोस भन्दै दिदी बहिनीले मखमलीको माला लगाइदिन्छन् । इन्द्रेणी जस्तै जीवन रंगिन होस् भनेर सप्तरंगी टिका लगाईदिन्छन् । दुःख कष्टले दाजु भाइको घरमा टेक्न नसकोस भनेर दैलोमा ओखर फुटाइदिन्छन् । यतिमात्र हो र ? आफ्ना दाजुभाई सफलताको शिखरमा घामभन्दा पहिले पुगुन भन्ने कामना गर्छन् । दाजुभाइका अंगअंग पुजेर सफलताको शिखर तर्फको यात्रको कामना पनि गर्दछन् । हाम्रो रक्षा कवचको रुपमा रहने विश्वास गरिने रक्षासूत्र बाँध्ने र जनै लगाउने चाडको रुपमा जनै पूर्णिमा र दिदीबहिनी र दाजुभाईबीचको आत्मियता अभिवृद्धिको चाडको रुपमा भाइटीका हामीसंग छंदैछ, भने फेरी राखी नै किन ? कि भारतले मनाउने पर्व भनेपछि स्वतः नेपाली मौलिक पर्व भन्दा विशिष्ट र उच्च हुने भएर हो ? किनभने समग्र नेपाल नै आखिर भारतको चाहना अनुसार त चल्छ । चाहे त्यो राजनैतिक मामला होस् चाहे अर्थतन्त्र या चाहे विकास निर्माण । म यहीनिर गम खान्छु । हामी दशै मनाउँछौं, उनीहरु दशेरा । के अब भारतीय संस्कृतिको सिको गर्दै दशैमा टीका जमारा लगाउन पनि छोड्ने हो कि ? तिहारको समयमा भारतमा दिपावलीको ठूलो महत्व हुन्छ, हामीकहाँ भाइटीकाको । अब यसलाई पनि फेर्ने कि ?
मैले यो आलेख तयार गर्नुको उद्देश्य कसैको मनमा ठेस ुपु–याउनु हैन । जनै पूर्णिमाको दिन राखी बाँध्नेहरुले अपराधै गरे गरे भन्न खोजेको हैन । समय सापेक्ष रुपमा संस्कृतिमा परिवर्तन आउँछ नै । राम्रो छ भने बाह्य संस्कृतिलाई पनि मान्नु पर्छ, अनुसरण गर्नुपर्छ । यसका कुनै आपत्ति छैन । तर बाह्य संस्कृतिलाई आयात गर्दै गर्दा आफैमा रहेको आन्तरिक संस्कृतिको महत्वलाई भुल्नु हुन्न भन्ने मात्र हो । अरुको संस्कृति अंगाल्दै गर्दा नजिकको तिर्थ हेलाँ भने सरी आफ्नो संस्कृतिलाई भुल्नु हुन्न छाड्नु हुन्न भन्ने मात्र हो । हामी बैशाखको १ गते भन्दा जनवरीको पहिलो तारिख धुमधामसंग मनाउँछौं । हामीलाई जनै पूर्णिमाका दिन रक्षाबन्धन बाँध्न भन्दा राखी बाँध्दा आनन्द लाग्न थालेको छ । हामी आफ्नै चुड्का, सोरठी, बालन, मारुनी , तामाङसेलो भन्दा पश्चिमी पप संगितमा रमाउन थालेका छौं । हामीलाई आफ्नै नेपाली भाषा भन्दा अंग्रेजी बोल्दा ठूलो भएको महसुस हुन्छ । बिहेमा बजाइने पञ्चेबाजाको स्थान विस्तारै विस्तारै व्याण्ड बाजाले लिँदैछ , शहरतिर । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने कुनै दिन हाम्रो मौलिक नेपाली संस्कृति जो हाम्रो पुर्खाले हाम्रालागि अमूल्य निधीको रुपमा सुम्पेर गएका थिए, लोप नहोला भन्न सकिन्छ र ? के यो विचार गर्नु पर्ने विषय होइन ?
अन्तमा हामी नेपाली भलै आर्थिक रुपमा गरिब हौला तर संस्कृतिमा गरिब छैनौं । हाम्रो संस्कृतिको ढुकुटी यति खजानाले भरिएको छ कि हामी अरुलाई बाँड्न सक्छौं । तर यदि समय छँदै हामी सचेत भएनौं भने र हामीलाई यसरी नै विदेशी संस्कृति प्यारो लाग्दै जाने हो भने एक दिन हाम्रो संस्कृतिको ढुकुटीमा हाम्रो भन्ने नै केही हुने छैन । हुनेछन् त केवल अरुले दिएको र अरुबाट चोरिएको कुराहरु मात्र । अरुबाट सहि कुराको सिको गर्नु राम्रो हो तर यति धेरैपनि सिको नगरौं कि आफ्नै अस्तित्व मेटियोस् । रामबहादुरले कपाल हरिबहादुरको जस्तो बनाउँछ, लुगा श्यामबहादुरले जस्तो लगाउँछ, बोली तुलबहादुरको जस्तो बनाउँछ, बानी हर्कबहादुरको जस्तो बनाउँछ अनि खाना मदनबहादुरले जस्तो खान्छ भने रामबहादुर चाहिँ खै ? को हो आखिर रामबहादुर ? रामबहादुरको अस्तित्व कहाँ छ ? त्यस्तै हामीपनि नयाँ वर्ष जनवरी १ मा मनाउने, नेपाली छोडेर अंग्रेजी बोल्ने, चाडपर्व भारतको मनाउने, खाना चाइनिज र कन्टिनेन्टल रुचाउने, लुगा पश्चिमाहरुले जस्तो लगाउने, गीत संगित पनि पश्चिमी नै मनपराउने हो भने हामी नेपाल िहुनुको परिचय खै ? खोई हामीमा नेपाली पन ? कसरी हामी नेपाली ? त्यसैले, संस्कृति हाम्रो धरोहर हो । हाम्रो पहिचान हो । नेपाली संस्कृति रहेसम्म मात्र हामी नेपाली रहन्छौं । यसलाई बचाउँ । आउनुहोस् हामी सबै मिली बचाउँ । अस्तु ।
भाेली श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
प्रविधिमैत्री शिक्षाको आशा
कोभिड–१९ बारे हामी कति जिम्मेवार र सचेत